विप्लवको पार्टीमा यसरी एकाएक पहिरो खस्यो ! | suryakhabar.com
राजधानीको बसाई ! उफ, नुहाउन त महिनादिनमा एकपटक पाए मर्नु !
त्रिशूलीमा खसेको बसमा सवार सबै यात्रुको नामावली सार्वजनिक
Home राजनीति विप्लवको पार्टीमा यसरी एकाएक पहिरो खस्यो !
विप्लवको पार्टीमा यसरी एकाएक पहिरो खस्यो !
on: April 28, 2018 In: राजनीतिTags: विप्लवको पार्टीमा यसरी एकाएक पहिरो खस्यो !No Comments
काठमाडौं । नेत्र विक्रम चन्द विप्लब नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारीका नेता तथा कार्यकर्ता माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् । एक कार्यक्रमका बीच पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनीहरुलाई पार्टीैमा भित्र्याएका हुन् ।
पार्टी प्रवेश कार्यक्रम पछि बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका दाहालले नेता तथा कार्यकर्ताहरुले समयमै सही निर्णय लिएको बताएका छन् । माओवादीका मुद्धाहरु तितर वितर हुने खतरा औल्याउृदै उनले अब सबै माओवादीहरु मूल पार्टीमा आउने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् । विप्लबले जनताको हित र राष्टियताको हितमा काम गर्नुको साटो जनता भड्काउने र अशान्ती गर्ने बाटो पक्डेको आरोप अध्यक्ष दाहालको थियो ।
यसैबीच, एमाले माअ‍ोवादीको् पार्टी एकताको प्रशंगमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले जुनसुकै हालतमा पनि दुवै पार्टीबीच एकता भइ छाड्ने बचनबद्धता व्यक्त गरेका छन् । संघीय गणतन्त्र स्थापनाका लागि भूमिका खेल्नेको एकता हुनै पर्ने धारणा राख्दै बाम एकता कसैले रोक्न नसक्ने तर्क गरे । पार्टी भित्र सबै बिषयमा सहमती भईसकेको र केही बिषयमा मात्र सहमती हुन बाकी रहेको उनको भनाई थियो ।
Tags: विप्लवको पार्टीमा यसरी एकाएक पहिरो खस्यो !
माइभ्याली गोल्डकपः थ्रीस्टार र मनाङ फाइनलमा
सगरमाथा आरोहण गर्न जान लागेकी तामाङलाई मन्त्रीले दिए झण्डा
संस्कृतिको संरक्षण गर्न धिमाल सङ्ग्रहालय निर्माण हुँदै
लोककुमारी स्मृति पुरस्कार दाङका नेपालीलाई
बनेपामा घरेलु हिंसाविरुद्ध सामुदायिक घुम्ती क्लिनिक सञ्चालन
सरकारी कार्यालयमा सूचना अधिकारी नै छैनन्